Last updated: Dec. 27 2017 | 2 min akhri
Yaa ka baxay waxaa abid taariikhaysan gabar dhaadheer ama nin gaaban oo iyaga ka badan ka badan? Sidee baa wax u? Ma laga xishoodo ama uun raaxo? Arrintan ayaa yada goobta shukaansi in muddo ah hadda, sida qaar ka mid ah waxay aaminsan yihiin dadka ay tahay in aan taariikhda gabdhaha dhaadheer iyaga oo ka badan ama guys gaaban oo iyaga ka badan. Waa markii sare aragtidani waxaa darrooyin la xaqiiqooyinka!
Waayahay, sidaas waxaa laga yaabaa in dareemi karaa yara sirgaxan hoos u laabaya dhunkado nin oo waa gaaban tan iyo markii la rumeysan yahay waxaa in guys leeyihiin in geedku? Laakiin xaggee xeerku ka timid? Ma waxay ka dhigan tahay in guys gaaban iyo gabdhaha dheer waa in aan marnaba taariikhda ku fudud sababtoo ah sharciga ee goobta shukaansi ugu?
Maxaa dhacaya haddii gabar dheer jecel yahay nin gaaban oo qeybsanaan? Waxaa oo dhan waa la karkariyo hoos si shakhsi ahaaneed sida, waxaa jira kuwa dhab door bidaan gabdhaha dhaadheer iyo guys gaaban, rumaysanina ama ma! Oo dadkii oo sida tegi doonaan oo ay la shukaansi ku, eegin waxa ay dad kale.
Ilaa iyo inta nin iyo gabar waa raaxo leh kasta oo kale ee height, ka dibna mid ka mid kale ma wuxuu xaq u leeyahay in ay isku dayaan in ay soo rogaan fikradahooda iyaga ku. Waxaa lagama maarmaan ah in ay aragtidani-darrooyin sida qaar ka mid ah ayaa weli ku doodi lahaa in ay fududahay ayuu yiri badan la soo gabagabeeyay, isagoo intaa ku daray in guys yihiin banki in had iyo jeer in geedku gabdhaha, oo mar walba dareemi doonaa habacsanaanta haddii ay gaaban tahay.
Waxaa la sheegay in guys aanay qasab ahayn faallo doonaa waxa ku saabsan, laakiin qaar ka mid ah hadaladiisa ay sameeyaan bandhigan doona sida raaxo ay gabadha dheer yihiin. Waxaa weligii wax soo jiidasho leh oo ku saabsan nin kaas oo aan ammaan ahayn oo naftiisa ku saabsan.
Is-kalsooni mar walba ciyaaraa kaalin wayn ka kiisaska noocaas ah. Tan iyo markii ay sidoo kale leeyihiin in ay taariikhda, markaas guys gaaban waa in ay kalsooni ku qaba in ay maqaarka u gaar ah oo iska joojiso walwal ku saabsan dhererkiisa. Tani xitaa iyaga ka dhalin karaa taariikh leh gabar in dhaadheer kuwaasoo ay soo qurxiyay, laakiin marna ku fakarin tegi lahaa iyaga la sababtoo ah dhererkiisa.
Oh haa, gabdhaha dheer waa in aan dhoola weli sidii ay sidoo kale leeyihiin waxyaabo dhowr ah si ay isu bartaan. Dating nin gaaban ma kuu xaq u leedahay in hoos u tuurid ay yaraan dhererka cunahooda. Sii nin ay nasasho, adag ay ku filan in si tiptoe sida in aad siiso dhunkasho!
Tall, madow, iyo doonteen ma aha in ay noqoto wax iska caadi ah. Sida ugu badan ee dhererka muuqataa jiidasho, waa in aanay noqon arrin go'aanka haddii ay jiraan sifooyin in badan yihiin jiidata.
Ha taariikhda ku sarajooggiisuna, taariikhda qofka! Waxa suurto gal ah in la helo nin waa kuwa dhaadheer, laakiin shaqsiyad ama xitaa dabeecad size ee digir ah. Isla ah gabdhaha. Height waa in uu noqdaa oo keliya arrin yar, ma arrin ah go'aan ka. Haddii mid ka mid dhacdo in taariikhdana qofka qaba sarajooggiisuna waxay rabaan, sidoo iyo wanaag. Haddii aadan, ilaa hadda waxaa fiican iyo wanaag.
Kuwa dhererka saaray ay tahay muhiimadda koowaad markii raadinaya taariikhaha, ka dibna marka hore ay u maleeyaan inuu naftiisa ku saabsan sida ay u badan tahay in uu noqon karaa kuwa qaba dhibaato. Dhererka ma xukumi karo, laakiin dabeecad awooddo. Waxaa laga yaabaa in tani ay tahay sida kaliya ee ay leeyihiin aragtidani gabdhaha dhaadheer leh guys gaaban darrooyin.